कम्पनी विश्लेषण स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैङ्क | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैङ्क
on: February 02, 2012 लगानी
कम्पनी विश्लेषण स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैङ्क
स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैङ्क
कम्पनीको नाम: स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैङ्क
वर्गीकरण: लघुवित्त विकास बैङ्क
मुख्य कार्यालय: जनकपुर, धनुषा
सम्पर्क कार्यालय: माइतीघर, काठमाडौं
स्थापना: २०५८ माघ १
अध्यक्ष: नन्दराम वैद्य
सीईओ: कन्हैयाबहादुर प्रधान
संस्थापक शेयर: ७० प्रतिशत
सर्वसाधारण शेयर: ३० प्रतिशत
देशका प्रतिष्ठित उद्योगी– व्यवसायी तथा स्थापित वाणिज्य बैङक्हरूको संलग्नतामा यो बैङक् स्थापना भएको हो । हाल यो बैङ्कले देशका ३८ जिल्लामा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैङक्ले देशभर ९६ शाखा÷उपशाखामार्फत करीब १ लाख ५५ हजार विपन्न वर्गलाई लघुवित्त सेवा पु¥याउँदै आएको बताएको छ ।
यो बैङ्कले राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त विकास बैङ्कको मान्यता पाइसकेको छ । बैङ्कद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार देशभरमा करीब ७ सय ६७ गाविस तथा नगरपालिकामा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ ।
यो कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयर मूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा अहिले यसको शेयर न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । यस कम्पनीको शेयरमूल्यको आधारमा बनेको आरएसआई रेखा स्केल अहिले स्केल ५० को हाराहारीमा छ ।
शुरूदेखि हालसम्मको कारोबारलाई हर्नेे हो भने यस कम्पनीको आरएसआई न्यूनतम स्केल ९ सम्म पुगेको छ भने अधिकतम स्केल ७१ सम्म पुगेको छ । नेप्सेमा औसत रूपमा कारोबार हुने र शेयरमूल्यमा खासै उत्तार चढाव नआउने भएकाले यस कम्पनीको आरएसआईमा खासै उत्तारचढाव देखिएको छैन ।
आगामी वार्षिक साधारणसभाका लागि यो बैङ्कको शेयर दर्ता पुस्तिका बन्द हुने समय नजिकिँदै गएकाले यसको शेयरमूल्यमा सामान्य वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले यो बैङ्कको शेयर खरीद गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि अहिले उपयुक्त समय देखिन्छ । तर, विक्रीकर्ताले केही समय प्रतीक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुने छ ।
चुक्तापूँजी रू. ११ करोड ५९ लाख रहेको यो बैङ्कले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. १ करोड ६६ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सो नाफा ४० दशमलव १२ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा बैङ्कको चुक्तापूँजी ६६ दशमलव शून्य १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
चुक्तापूँजीमा भएको वृद्धिसँगै बैङ्कको मुनाफामा पनि राम्रै वृद्धि भएकाले यसको मूल्य–आम्दानी अनुपातमा सुधार देखिएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैङ्कको जगेडा कोष रू. १० करोड ९८ लाख रहेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो ६ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढी हो । विगत १ वर्षको अवधिमा बैङ्कको निक्षेप ९१ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८० करोड ९० लाख पुगेको छ ।
गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी १ सय २४ प्रतिशत तथा सञ्चालन मुनाफा ३७ दशमलव ४६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा बैङ्कको लगानी भने ५७ दशमलव १६ प्रतिशत घटेर रू. १६ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको छ ।
लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा कटौती गर्दा आगामी दिनमा बैङ्कको मुनाफा दरमा कमी आउने सम्भावना देखिन्छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैङ्कको कर्जा प्रवाह ८३ दशमलव ४१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ ।
शेयर कारोबार विश्लेषण
ड्ड १ वर्षअघिको तुलनामा अहिले यसको शेयरमूल्य बढी नै छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हाल कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको शेयरमूल्य गतवर्षको तुलनामा करीब ३० देखि ४० प्रतिशत घटेको समयमा यो कम्पनीमा भने त्यस्तो असर देखिएको छैन ।
यस बैङ्कले आगामी फागनु १२ मा हुने १०औँ वाषिर्क साधारणसभाबाट ५ प्रतिशत बोनस शेयर र २६ दशमलव ५८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि बैङ्कले यही माघ २६ देखि पुस १२ सम्म शेयर दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने भएको छ ।